Edena voatahiry	 18 décembre 2014	 Clics : 1201
Tonga any an-trano ihany nony farany!	 17 décembre 2014	 Clics : 1317
Fifaliana mandrakizay	 16 décembre 2014	 Clics : 1272
Fandresena ny fahafatesana	 15 décembre 2014	 Clics : 1316
Endrey, valisoa tahaka ny ahoana re izany	 13 décembre 2014	 Clics : 1303
Fisehoan’i Kristy be voninahitra	 14 décembre 2014	 Clics : 1382
Ilay fiverenana any amin’ny tany niaviana!	 12 décembre 2014	 Clics : 1570
Raha eo am-piandrasana isika	 11 décembre 2014	 Clics : 1668
Ankehitriny , ianaro ny hiran’ny fandresena	 10 décembre 2014	 Clics : 1394
Miomana ny hiaina miaraka amin’ireo anjely	 9 décembre 2014	 Clics : 1360
Iza no azo fidina?	 8 décembre 2014	 Clics : 1453
Nahoana no tsy izao ankehitriny izao ?	 5 décembre 2014	 Clics : 1447
Mijery any amin’ny mandrakizay	 7 décembre 2014	 Clics : 1352
Mbola ho avy	 5 décembre 2014	 Clics : 2093